विद्युत प्राधिकरणको नाफाः एक वर्षमै ७ अर्ब २० करोड | Makalukhabar.com
विद्युत प्राधिकरणको नाफाः एक वर्षमै ७ अर्ब २० करोड
साउन २८, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमै ७ अर्ब २० करोड नाफा आर्जन गरेको छ ।
उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राधिकरणले ७ अर्ब २० करोड नाफा कमाएको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पुनका अनुसार २०७४–७५ मा प्राधिकरणले २ अर्ब ९० करोड नाफा कमाएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १ सय ४९ प्रतिशतले बढी नाफा कमाएको हो।
केही वर्षयता विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत प्रसारण र वितरण लाइनको सुदृढीकरणमा केन्द्रित भएको थियो । सोही कारण बढी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको ऊर्जामन्त्रीको दाबी छ ।
मन्त्री पुनले भने, ‘प्राधिकरणले साँवा, र रोयल्टी गरी राज्यको ढुकुटीमा १५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुका साथै प्राधिकरणले विद्युत् चुहावटमा पनि उल्लेख्य रुपमा कमि ल्याएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलब १३ प्रतिशतले घटेर विद्युत् चुहावट १५ दशकमलब १३ प्रतिशत छ।’
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ४७ लाख युनिट अर्थात् ३२ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
ठगीबारे पठाओको स्पष्टिकरणः भाडा कानूनबमोजिम, अतिरिक्त शुल्क ‘वेटिङ चार्ज’
भरतपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु
प्रभु बैंकको डिबेञ्चर बाँडफाँड
कात्तिक २९, काठमाडौं । प्रभु बैंकको डिबेञ्चर बाँडफाँड गरिएको छ । बैंकको गरेको रु. १ अर्ब बराबरको १०.२५ प्रतिशत डिबेञ्चर–२०८६ ऋणपत्र आज बाँडफाँड गरिएको हो ।रु. १,०००।– अंकित दरको १० वर्षको भुक्तानी अवधि भएको वार्षिक १०.२५ प्रतिशतका दरले अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने गरी जारी गरेको रु. १ अर्ब... जारी राख्नुहोस...
कोशी अस्पतालमा प्रभु बैंकको काउण्टर सञ्चालनमा आउने
कात्तिक २९, विराटनगर । प्रभु बैंकको नयाँ काउन्टर कोशी अञ्चल अस्पतालमा सञ्चालनमा आउने भएकाे छ । वडा नं. ७ स्थित कोशी अस्पतालमा सञ्चालित काउण्टरबाट उक्त असपतालमा उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीले सेवा पाउने छन् । स्वास्थ्य उपचारको सिलसिलामा कोशी अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई सरल रुपमा बैंकिङ्ग सेवा उपल... जारी राख्नुहोस...
सुनचाँदीको भाउ घट्यो किन्ने होईन ?
कार्तिक २९, काठमाडौँ । आज साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि घटेकोे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंंघले जनाएको छ । बिहिबार प्रतितोला प्रतितोला ७२ हजारले कारोकार भईरहेको छापावाल सुन आज तोलामा दुई सय घटेर प्रतितोला ७१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी आज ते... जारी राख्नुहोस...
सुनको भाउ ह्वातै बढ्यो
कार्तिक २८, काठमाडौँ । बिहिबार सुनको भाउ उकालो लागेको छ ।बिहिबार सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंंघले जनाएको छ । बुधबार प्रतितोेला ७१ हजार ४ सयमा कारोबार भईरहेको छापावाल सुनमा आज प्रतितोला ७२ हजारले कारोकार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी बुधबार प्रतितोला ७१ हजा... जारी राख्नुहोस...
कामना सेवा विकास बैंक अब्बल बैंक बन्न सफलः अर्थमन्त्री
कात्तिक २७, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कामना सेवा विकास बैंकले छोटो अवधिमा राम्रो प्रगति गरी अब्बल बैंक बन्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । बैंकको १३ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई संवोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त कुरा बताएका छन् । साथै आगामी दिनमा बैंक बझै मजबुत हुदै जाने र देश... जारी राख्नुहोस...
नेपालमै पहिलो पटक नेविकोले ल्यायो गिफ्ट प्याकमा सुगर फ्रि डाइजेस्टीभ विस्कुट
कात्तिक २७, काठमाडौं । नेपालकै पहिलो विस्कुट उत्पादक कम्पनी नेविको प्रा.लि.ले गिफ्ट प्याकमा नेविको सुगर फ्रि डाइजेस्टीभ विस्कुट बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले पहिलो पटक डाइजेस्टीभ विस्कुट अहिलेसम्मकै ठूलो प्याकमा ल्याएको हो । विस्कुटलाई उपभोक्ताले अत्याधिक रुचाएका छन् । उत्पादनको छोटो समयमै देशभरबाट डि... जारी राख्नुहोस...
नेपाल बैंकद्वारा मानव कल्याण समाज (सेवा घर) लाई तीन लाख सहयोग
कात्तिक २७, काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले स्थापनाको ८३ वर्षको अवसरमा भक्तपुर स्थित मानव कल्याण समाज (सेवा घर) लाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाँगुनारायण–८ भक्तपुरलाई ३ लाख सहयोग रकम प्रदान गरेको छ ।आज सेवा घरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रदेश ३ का प्रमुख सुन्दर... जारी राख्नुहोस...
सरकारलाई निर्माण व्यवसायी महासंघको ७ दिने अल्टिमेटम, निर्माणको काम ठप्प बनाउने चेतावनी
कार्तिक २७, काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्थगित गरेको आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने भएको छ । कार्तिक २२ गते बसेको महासंघको बैठकले १७ बुँदे माग अघि सार्दै मंसीर १ गतेबाट राष्ट्रिय भेला गरी सशक्त रुपमा आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो । देशभरका करिब १५ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु सदस्य... जारी राख्नुहोस...
कार्तिक २७, काठमाडौँ । मंगलबार स्थिर रहेको सुनको भाउ बुधबार तोलामा २ सय रुपैयाँ बृद्धी भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंंघले जनाएको छ । मंगलबार प्रतितोला ७१ हजार २ सयमा कारोबार भई बुधबार स्थिर रहेको छापावाल सुनमा आज तोलामा २ सय रुपैयाँ बृद्धी भई प्रतितोला ७१ हजार ४ सयमा कारोबार भईरहेको महासंघले जना... जारी राख्नुहोस...
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले ३८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने
कात्तिक २६, काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले ३८ प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गर्ने भएको छ । आफ्नो आठाैं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्दै क्लियरिङ्ग हाउसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी २१.६ करोड रहेकोमा ३८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी २९.८ करोड पुर्याउने निर्णय गरेको हो । साथै बोनस शेयर ट्याक्स प्रयोजनक... जारी राख्नुहोस...
बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणः गच्छदारसँग अख्तियारकोे चार घण्टा बयान
सीमा अतिक्रमणको पराकाष्ठः प्याराताल कब्जा गर्न सीमास्तम्भ गायब
यू–१९ च्यालेञ्जर्स ट्रफी अन्तर्गत भारतमा जारी क्रिकेटमा नेपालको लगातार तेस्रो हार
छापा हाइलाइटः आलम जेल चलान, जेल पठाउने आदेश दिनासाथ न्यायाधीश र सरकारी वकिलले जिल्ला छाडे
पञ्चाङ्ग र यो साताको राशिफल, शुभ रंग र अंकसहित
‘कम्युनिष्ट सरकारले धर्मपनि बेच्यो, संस्कृति पनि बेच्यो अब मुलुक पनि बेच्न बेर छैन’
तिलक राईको मुख्य एजेन्डा ‘भ्रष्टाचार मुक्त धरान’ बनाउने